उहाँ को लागी मेरो बारेमा सोच्न को लागी प्रार्थना। ? दिन र रात [र फिर्ता]
मलाई सोच्न प्रार्थना। हामी प्रेम र चाहिएको महसुस गर्न को आवश्यकता संग बाँचिरहेका छौं, यो केहि हदसम्म सामान्य हो। अस्विकारको डरले त्यो आवश्यकतालाई पनि बढाएको छ र हामी प्राय: केहीको खोजीमा आफैलाई भेट्छौं प्रार्थना त मेरो बारेमा सोच्नुहोस् दिन र रात, फिर्ता आउनुहोस् र मलाई कल गर्नुहोस्।
यो एकदम निराश उपाय जस्तो देखिन्छ तर वास्तविकताबाट केहि पनि छैन।
प्रार्थनाहरू हाम्रो सबैभन्दा शक्तिशाली आध्यात्मिक हतियार हो, त्यसैले हामीले यसलाई श doubt्का गर्नु पर्दैन र जतिसुकै जरुरी भए पनि यो जहिले पनि जरुरी भएमा यसको आवश्यकताको सामना गर्नु पर्दछ।
प्रार्थना सँधै समाधान हुनेछ र यो हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा लागू हुन्छ।
त्यहाँ सबै कुराका लागि विशेष लिगेसीहरू छन् र यो विशेष अवस्थामा त्यहाँ एक समान रूपमा प्रभावशाली र शक्तिशाली अरूमा पनि छ।
1 के तपाईं मेरो बारे मा सोच्नुहोस् प्रार्थना प्रार्थना गर्दछ?
1.1 मलाई सोच्न पवित्र मृत्युलाई प्रार्थना गर्नुहोस्
1.2 तपाईंले अहिले नै मेरो बारेमा सोच्न प्रार्थना गर्नुहोस्
1.3 मलाई असाध्यै खोज्न प्रार्थना
1.4 मेरो बारेमा सोच्नुहोस् र फिर्ता आउन प्रार्थना गर्नुहोस्
के तपाईं मेरो बारे मा सोच्नुहोस् प्रार्थना प्रार्थना गर्दछ?
यस लेखमा राखिएका सबै वाक्यहरू परीक्षण गरिएको छ र सफलताको सयौं साक्षी छन्।
तिनीहरू सबै धेरै शक्तिशाली छन् र अविश्वसनीय शक्तिहरू छन्।
यदि तपाईं उनीहरूको विश्वासको साथ प्रार्थना गर्नुहुन्छ र यदि तपाईंलाई खाँचो परेको छ भने, तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तिनीहरूले काम गर्नेछन्.
परमेश्वर र अन्य सन्तहरू वास्तवमै आवश्यक परेकाहरूलाई सहायता गर्छन्। यदि तपाईंलाई खाँचो छ भने केवल भगवान्‌को मदत माग्नुहोस्।
यसले तपाइँको बारेमा सोच्न, तपाइँलाई प्रेम गर्न, खोज्ने र निराशा दिन, दिन र रात, सबै समयमा बनाउँदछ।
मेरो भावनाहरू र मेरो शरीर, शरीरको विचारहरू र त्यस व्यक्तिको आत्माको अधीनमा (व्यक्तिको नाम भन्नुहोस्), मलाई रात र दिन आउँनुहोस् परिस्थितिहरू मेरो साथमा हुनेछन्।
सान्ता मुर्ते लेडीको नाममा म तपाईंलाई सोध्छु, मलाई दिनुहोस् बल र पूर्ण नियन्त्रण, मेरो पक्षमा त्यो व्यक्ति पाउनको लागि, म तपाईंलाई सधैं मेरो ख्याल राख्न आग्रह गर्दछु, र मैले तपाईंलाई माग्ने सबै पक्षहरू पूरा गर्न कहिल्यै रोक्नुहोस्।
जब सम्म तपाईं यो चाहानुहुन्छ, म तपाईंलाई तपाईंको उपस्थितिमा लैजानु भन्छु। म तपाईंलाई कल गर्दछु, मलाई कहिल्यै नत्याग्नुहोस् र म तपाईंलाई उपेक्षा नगर्नुहोस्।
मलाई माया गर्नु भनेको केही गाह्रो कुरा हो।
त्यसकारण हामीले कसैलाई बलियो र प्रेममा धेरै शक्ति संग प्रार्थना गर्नु पर्छ।
सान्ता मुर्ते सहि इकाई हो गर्न को लागी
तपाईंले अहिले नै मेरो बारेमा सोच्न प्रार्थना गर्नुहोस्
म तपाईं समक्ष आउन सक्छु ताकि तपाईं मेरो मुटु हटाउन सक्नुहुन्छ र मेरा घाउहरू निको गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं जो सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ र प्रेमको घोषणा गर्नुहुन्छ संसार म तपाईंलाई मेरो लागि मध्यस्थता गर्न आग्रह गर्दछु, म तपाईंको सहयोग र दयाको लागि अनुरोध गर्दछु हे मेरो प्रधान दूत!
मलाई प्रेमको लागि मेरो भोक मेटाउन मद्दत गर्नुहोस्, भावनात्मक र वास्तविक बन्धन सिर्जना गर्न मद्दत गर्नुहोस्। बनाउनुहोस् (प्रियजनको नाम भन्नुहोस्) शुद्ध प्रेमको आँखाले मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मेरो हृदयका अनुरोधहरू सुन्नुहोस् र स्वर्गको राजकुमार, प्रेमको प्रधान प्रतीक्षामा मलाई नत्याग्नुहोस्।
तपाईं जो सबैभन्दा उच्च प्रेमको हकदार हुनुहुन्छ, मेरो हृदयमा शान्तिको खोजी गर्नुहोस् यस व्यक्तिसँग म खुशी छु भन्ने संतुष्टि सहित मलाई भर्नुहोस् जुन मलाई प्रेम भएको छ। मलाई थाहा छ कि तपाईंको भलाइले तपाईंको मुटु छुनेछ र मकहाँ आउनुहुनेछ, हामी परमेश्वरका सेवक हुनुहुन्छ कि हामी दुबै हौं। , तपाईं चमत्कार गर्नुहुन्छ।
तिम्रो माया हो इन्फिनिटो मेरो प्रधान देवदूत, तपाईंको महानताले मलाई भर्दछ र मेरो कृतज्ञता अनन्त हुनेछ। उसको मुटु छुनुहोस् र तपाईं तत्काल मेरोलागि निको पार्नुहुनेछ।
भलाइ म संग होस् र तपाईंको प्रेम संसार संग होस्, आमेन!
यस अवस्थामा हामी प्रार्थनाको नतिजा तुरुन्तै देख्नेछौं यदि हामीले यो पुष्टि गर्न सकेनौं र यो विशेष प्रार्थनाको बारेमा शक्तिशाली कुरा हो, जसले हामीलाई विश्वास गर्न आमन्त्रित गर्दछ कि चमत्कार गरियो कि हामीले परिणाम नदेखे पनि।
कसै-कसैको विश्वास छ प्रार्थना वा मास्टर ईच्छा वा विचार को अभिप्राय संग सोध्नुहोस् अन्य व्यक्तिको हाम्रो पक्षमा स्वार्थी कार्य हो, तर अरूहरू विश्वास गर्छन् कि यो प्रेमको कार्य हो र त्यहाँ धेरै दृष्टिकोणहरू छन्।
उदाहरण को लागी ती घटनाहरुमा जहाँ घमण्डले छेप्यो र एक व्यक्तिलाई आफ्नो पाखुराको पछाडि मुड्ने अनुमति दिदैन, त्यसो भए मेरो प्रियजनले मलाई सोच्नको लागि यो शक्तिशाली प्रार्थनाको एक धेरै उपयोगी हुन सक्छ, तर यो त्यस्तो होइन कि हामी दुखी हुने छौं। सबैलाई र त्यसपछि प्रार्थनाको साथ हामी ब्लर र नयाँ खाता बनाउन कोशिस गर्नेछौं।
यो अभिप्राय आउन को लागी एक दृष्टिकोण को लागी एक आवश्यकता सिर्जना गर्न को लागी हो, अर्को व्यक्ति लाई निर्णय गर्न को लागी झुकन को लागी छैन र म के गर्न चाहान्छु।
मलाई असाध्यै खोज्न प्रार्थना
"अब मलाई खोज्नुहोस्, यो सटीक क्षणमा (तपाई व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुहुन्छ) म तपाईलाई जहाँ भए पनि मलाई खोज्न चाहन्छु।
प्रभु, अहिलेको क्षणदेखि नै, म तपाईंलाई यो व्यक्तिको नाम राख्न अनुरोध गर्दछु कि म बाहेक अरू कुनै कुरा सोच्न सक्दिन, तपाईको एकाग्रता केवल मलाई समर्पित छ।
यस तरिकाले तपाईं यो बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंलाई मेरो जीवनमा मलाई आवश्यक छ र तपाईं अर्को दिन मेरो प्रेम बिना खर्च गर्नु हुँदैन। यो क्षण बनाउनुहोस् (व्यक्तिको नाम) तपाईंको गर्व बिर्सनुहोस्, मलाई कल गर्नुहोस्, मलाई असाध्यै खोज्नुहोस् र तपाईंको बाँकी दिनहरू तपाईंको पक्षमा मलाई राख्न चाहनुहुन्छ।
ईश्वरको शक्तिले म उसका तीन जना स्वर्गदूतहरूलाई बोलाउँछु। MIGUEL, RAFAEL, GABRIEL, ताकि तिनीहरूले आफ्नो हात राखे (व्यक्तिको नाम) र दिमागबाट दोस्रो प्राप्त गर्न सक्दैन।
उसको मुटु, शरीर, आत्मा र आत्मा ममा एक्लै छ र केवल मेरो मात्र, कि उहाँ केवल मलाई सोच्नुहुन्छ र इच्छा गर्नुहुन्छ, कि त्यसले जानाजानी नराम्रोसँग पुग्न चाहने सबैलाई फर्काउन सकीन्छ।
येशूको नाममा, आमेन। ”
प्रार्थना हामीले पाउनु पर्ने सबै आवश्यकताहरूको लागि प्रभावकारी छ किनकि मानिसहरू र भावनाहरू निराशको भावनाको लागि प्रायः चाहिन्छ जुन हामीले हरदम सन्तुष्ट पार्न प्रयास गर्नुपर्दछ।
अर्को व्यक्ति, हालको जोडी, वा हालसालै मलाई त्यागेको केही पूर्व व्यक्तिले हामीलाई रिस उठाउनु नै स्वास्थ्यकर उपाय हो जस्तो सोच्न प्रार्थना गर्नुहोस्।
यो धेरै अधिक सिफारिस गरिएको छ त्यस व्यक्तिको खोजी गर्न र आफूलाई दर्दनाक अस्वीकृतिको सामना गर्न प्रार्थना गर्नुहोस्.
प्रार्थना शब्द भन्दा धेरै हुन सक्छ, सबै कुरा विश्वास मा हो जुन हामी हाम्रो प्रार्थना गर्छौं।
मेरो बारेमा सोच्नुहोस् र फिर्ता आउन प्रार्थना गर्नुहोस्
“ईश्वरको महान शक्तिमा म तपाईंलाई निराशाको भाव, प्रभुत्वको भावना, अप्ठ्यारो महसुस गर्दछु।
म तपाईंलाई हाकिम (व्यक्तिको नाम) मा हावी हुन र उनीहरूको sen इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछु, ताकि यस प्रकारले म उनीहरूको दिमागबाट एक पल्ट बाहिर जान सक्दिन।
म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु, ताकि तपाईं यात्रा गर्न चाहानु भएको यस मार्गमा तपाईं मेरो गाईड हुन सक्नुहुन्छ, ताकि (व्यक्तिको नाम) मेरो मात्र हो, ताकि तपाईं मित्रताको पछाडि जाने अभिप्रायहरू प्राप्त गर्न चाहने सबैबाट टाढा जान सक्नुहुन्छ वा जसले इच्छा गर्दछ उसलाई मबाट टाढा लैजानुहोस्
म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु कि दिन र रात तपाईंको एउटै मात्र विचार बन्नुहोस्, ताकि तपाईं मलाई खोज्न र मेरो छेउमा हुन चाहनुहुन्छ।
तपाईंको नाममा, महान आत्मा। आमेन
हामीलाई छोडेको कसैको फिर्ती प्राप्त गर्न आध्यात्मिक सहयोगको लागि सोध्नु एउटा अभ्यास हो जुन धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको छ।
उनीहरू उहाँलाई बोलाउँछन् la निराशा को प्रार्थना र यो तपाईं कल्पना भन्दा बढी शक्तिशाली छ.
यी प्रार्थनाहरू दिनको कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ, तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा के तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ।
किनकि प्रार्थना स्पष्ट विचारहरूको साथ हुनुपर्दछ जुन हामी वास्तवमै चाहँदैनौं भनेर केही सोध्नबाट जोगिन।
धेरैलाई थाहा छैन उनीहरू एक भन्दा बढि प्रार्थना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् प्रार्थना। यस अवस्थामा हामी हो भन्न सक्छौं।
तपाईले चाहानु भएको सबै प्रार्थनाहरू गर्नुहोस्, तर यसलाई फरक दिनमा मात्र गर्नुहोस्।
उही उद्देश्यको लागि उही दिन कहिले प्रार्थना नगर्नुहोस्।
मेरो बारेमा सोच्न र दिनभर र मलाई सपना देखाउन प्रत्येक प्रार्थनाको बीचमा १ दिनको खाली ठाउँ छोड्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सबै प्रार्थनाहरूमा विश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि तपाइँसँग विश्‍वास छ र जहिले पनि विश्‍वास गर्न प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि सबै कुरा बाटोमा छ भने, सबै प्रार्थनाहरू काम गर्दछन्।